Godina-Arsii Aanaa Jajuu keessatti Manni Maree Aanichaa wal gahii ariifachiisaa jechuun Miseensota isaa walitti qabee marii gaggeessaa jiraachuu Qeerroo gabaase. – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORG
Godina-Arsii Aanaa Jajuu keessatti Manni Maree Aanichaa wal gahii ariifachiisaa jechuun Miseensota isaa walitti qabee marii gaggeessaa jiraachuu Qeerroo gabaase.
On May 7, 2017 By OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORGIn oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org
Caamsaa 6 ,2017/Godina Arsii Aanaa Jajuu keessatti Manni Maree Aanichaa Wal gahii Ariifachiisaa jechuun Miseensota Isaa walitti qabee Marii gaggeessaa jira.Akka Odeessi Achii Arganne himutti.Ciminaan wanti gadi fageessanii irratti marii gaggeessaa jiran.
Dargaggoota Maqaa Qeerroo Bilisummaa jedhuun gurmaayanii Kaayyoo Adda Bilisummaa Oromoo ABO Galmaan gayuudhaaf sochii godhaa jiranii fi turan Aanaa keenna keessaa qulqulleessinee dargaggoota gurmeessuun hojiitti galchuu qabna. Dargaggoonni Gurmaayuu didanii akkanumaan jiraatan bakka hundatti karaa isaan hin beeyneen duubni isaanii qoratamuu qaba.Dargaggoon carraa hojii mootummaan mijeessef irratti Dargaggeessi hin gurmoofne Miseensa ABO ta’uun isaanii beekamee Qaamolee nageenyaatiif Dabarsinee kennuun Aanaa keenna haa qulqulleeffannu jechaa jiraachuu maddeen Qeerroo Aanichaa gabaasee jira.
Kana malees gama kaaniin
Godina Arsii Aanaa Aminyaa Keessatti Dargoota Dirqisiisanii Waldaa Dargaggootaa keessatti Miseensa ta’aa jechuun Mootummaan Wayyaanee Dirqisiisaa jira.Akka Oduun Achii nu geette himtutti Dargaggoota Maqaa Waldaa Dargaggootatiin Ijaaranii Miseensota OPDO godhuuf karoora baafameefi Dargaggoota Miseensa hin taanu jedhan Miseensota Adda Bilisummaa Oromoo Qeerroo Bilisummaati jedhanii mana hidhaatitti guuruuf akka ta’es maddeen Oduu Qeerroo Aanaa Amiinyaa Gabaasee jira.Godina Addaa Naannawa Finfinnee Magaalaa Laga Xaafoo keessaa Dargaggoonni Oromoo iddoo bashannanaatii qabamanii hidhamaa jiraachuun dhagayameera.Magaalaa Laga Xaafootti Dargaggoota Oromoo Mana Puulii keessaa qabamanii guyyaa har’aa Sanbata ganama poolisoota Feederaalatiin gara mana hidhaa geeffaman keessaa kanneen maqaa isaanii arganne. Abbabaa Badhaasaa, Asraat Birruu, Heenok Shibbiruu,Sisaay Abrahaam, Birhaanuu Baqqalaa, Sisaay Wandimmuu fi Lammaa Indaalaa ta’uun baramee jira haata’u malee Dargaggoonni kunniin bakki itti hidhaman hanga ammaa akka hin beekamin Qeerron Naannawa sanii gabaasee jira